पहिलो न्यूज फेष्टिभलको रोचकता | रुपान्तरण
पहिलो न्यूज फेष्टिभलको रोचकता
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १६:५८
भैरहवा । भैरहवाका क्रियाशील पत्रकारहरुको संगठन लुम्बिनी प्रेस क्लबले “संघीयतामा सञ्चार, समृद्धिका लागि मोफसल नै मूलधार” भन्ने नारा सहित पहिलो पटक लुम्बिनी न्यूज फेष्टिभल सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा बिभिन्न सञ्चारगृहका सम्पादक, सञ्चारकर्मीका साथै देशका बिभिन्न बिकट क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा तीन दिनसम्म समाचार के लेख्ने ? कस्तो लेख्ने ? कस्का लागी लेख्ने ? र कसरी लेख्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा बिभिन्न सञ्चार माध्यमको संख्या बढीरहेको छ । पत्रिकासंगै, टेलिभिजन, अनलाइन, न्यू मिडिया खुलिरहेका छन् । यी सबै सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार ब्यवस्थापन कसरी गर्ने, सबै खालका दर्शक र पाठकको लागी कसरी समाचार उपयोगी बनाउने ? देश विकास समृद्धि र संघियता अनुकुलका समाचार कसरी उत्पादन गरेर त्यसलाई ब्यवस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा समेत छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
सूचना र सञ्चारमा नया प्रयोग बढी रहेको र पाठक तथा दर्शकको रुचि पनि फेरि रहेको अवश्थामा आयोजित फेष्टिबलले संघियता र समृद्धिका लागी सञ्चार माध्यमको आवश्कयता, महत्व र उपयोगिता बढाउनको लागी समेत महत्पूर्ण भुमिका खेल्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ ।
आयोजक संस्था लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष दिपेश पछाईका अनुसार सधैभरि राजधानीको मुख ताकेर बस्ने अहिलेको समय नभएको बताए । उनले अहिले ७ वटै प्रदेशको मुलधार अब सोही प्रदेशबाट हुने सन्देश दिन नेपालमै पहिलो पटक न्यूज फेष्टिभलको आयोजना गरेको बताए । उनले अब पत्रकारिता क्षेत्रको लागी अरु कसैले नभई स्वयम पत्रकारले नै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कारण यो कार्यक्रमको संयोजन गरिएको बताए ।
दिनसम्म चलेको न्यूज फेष्टिभलको पहिलो दिनको पहिलो सत्रमा रुपान्तरण डट कमका सम्पादक तथा अग्रज पत्रकार किशोर नेपाल, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, पत्रकार मोहन मैनाली, खोज पत्रकारिता केन्द्रका अध्यक्ष शिव गाउले, नागरिक दैनिकको प्रदेश प्रमुख रेखा भुषालको सहभागीता रहेको थियो । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पत्रकारिता शास्त्र–विज्ञान भएकोले यो कहिल्यै नसकिने बताए ।
उनले पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको तथा स्थानीय सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा समेत समस्या आएको बताएका थिए । उनले प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता जवरजस्ती भिडाएर नियम मान भनेकै आधारमा पत्रकारिताको विकास नहुने जिकिर गरे ।
संघीयतामा न्यु मिडिया विषयक समूहगत छलफलमा सहभागीले पत्रकारिताको सिद्धान्त न्यु मिडियामा पनि लागू हुने बताएका थिए । अब न्यु मिडियाले पनि सबुत र प्रमाणका आधारमा पत्रकारिता गर्नु जरुरी भएको अनलाइन खबरका सम्पादक अरुण बरालले बताए ।
नेपाल लाइभका सम्पादक नारायण अमृतले न्यु मिडिया प्रयोग गर्दा गलत तरिकाले प्रयोग गर्न नहुने बताए । पत्रकार विजय पौडेलले समाचार कसका लागि र किन दिने भन्ने पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पत्रकार जेवी पुन मगरले पछिल्लो पुस्ताले मल्टी मिडियामा आकर्षण बढाएको बताए ।
यसैगरी, स्टोरी टेलिङ समूहगत छलफलमा लेखक एवं पत्रकार नारायण वाग्लेले समाचारमा पाठकलाई जिज्ञासु बनाउन सक्नुपर्ने बताउँदै पत्याउने समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिलेको पुस्ताले बुझ्नु जरुरी भइसकेको बताए । उनले अझै पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रत्येक समाचारमा ६ कको प्रयोग नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताए ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष श्यामलले समाचारले समाजलाई प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने बताउँदै व्यक्तिगत र पार्टीगत समाचारको बाढीलाई अब रोक्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
लुम्बिनीमा भएको पहिलो न्यूज फेष्टिबलमा ‘लुम्बिनी, सम्पदा, समृद्धि र समाज’ विषयमा समेत बहस गरिएको थियो । लुम्बिनी भन्ने बित्तिकै आफुलाई दिक्क लाग्ने रुपन्देहीका सांसद घनश्याम भुषालको भनाई थियो । भुसालले लुम्बिनी राज्यकै तर्फबाट अमूर्त बन्दै गएको बताए ।
विश्वका धार्मिक, सामाजिक, बुद्धिज्म, दार्शनिक, समाज लुम्बिनीसँग जोडिने भन्दै उनले लुम्बिनीलाई त्यही अनुसार विकास गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । लुम्बिनीको विकास जुन गतिले हुनु पर्ने हो, त्यो नभएकोमा आफू र राज्य नै दोषी भएको उनले स्विकारोक्ति थियो । बहस गरेका पत्रकार, राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र सामाजिक अभियन्ताले लुम्बिनी बहुआयामिक क्षेत्र र अन्र्तराष्ट्रिय पहिचान भएको बताएका हुन् ।
लुम्बिनी डेटिङ स्थल बनेको देखि फोहोर, धूलो, धूवाँले बढेको वातावरणीय प्रदूषणसम्मको चिन्ता गरे । त्यस्तै निर्माणाधीन संरचनाको व्यवस्थापन सही ढंगले हुन नसकेको र लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन नभएकामा चिन्ता गरे ।
लुम्बिनीले अधिग्रहण गरेको ११ सय ५० बिघा क्षेत्रफल जमिन उपलब्ध गराउने जग्गाधनीको पहिचान हुन नसकेकोदेखि विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नसक्नुका पछाडिका दोषीको खोजी हुनुपर्ने आवाज उठ्यो ।
रुपन्देहीका प्रदेश सभा सदस्य एवं स्थानीय फकरुद्दिन खानले लुम्बिनीमा अहिलेसम्म धार्मिक विभेद नरहेको बताए । उनले लुम्बिनी परिसरमा ७० प्रतिशत इस्लामिक धर्मावलम्बी रहेको र उनीहरु अहिले पनि बुद्ध धर्मको प्रचारप्रसारमा सहयोगी बन्दै आएको बताए ।
फेष्टिवलले कार्यक्रमको निचनेडको रुपमा १६ बुंदे निष्कर्ष समेत सार्वजनिक गरेको छ । न्यूज फेष्टिभलले स्थानीय, सामुदायिक तथा जनताद्वारा सञ्चालित मिडियाहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
नेपाली मिडियामा व्याप्त केन्द्र र मोसफल भन्ने अवधारणा समाप्त पार्दै आफू कार्यरत संघ, हरेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै केन्द्र मान्दै आ–आफ्ना क्षेत्रका समाचार र विचार जनता, सरकार र सम्बन्धित निकायमा व्यापक रुपले पुर्‍याउने महोत्सवले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी पत्रकार आचारसंहिता दृढता पूर्वक पालना गर्दै व्यवसायिक पत्रकारिता प्रति प्रतिबद्ध रहने, राजनीतिक दलसंगको आबद्धता र सरकार निकट बन्ने सोचाँइबाट मुक्त हुने, पत्रकारिताको पेशाप्रति पूर्ण निष्ठावान भइ आफूलाई सबै प्रकारका प्रविधि एवं सीपबाट सुसज्जित बनाउँदै न्यू मिडिया न्यू मिडियम, ट्रेडिशनल मिडियम आदिको व्यापक प्रयोग गरी नेपाली पत्रकारितालाई स्मार्ट जर्नालिज्म उन्मुख गराउने, राष्ट्रको समृद्धिका साथसाथै राष्ट्रियता, जनजीविका, स्वाधिनतता र जनताको सक्रियतामा सञ्चालित न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जनता केन्द्रीत मिडियाको रुपमा सक्रियतापूर्वक सहभागि हुने महोत्सवले अठोट गरेको छ ।
डिजिटल र इलेक्ट्रोनिक मिडियासम्बन्धी प्रतिकूल कानूनहरुमा तत्काल परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने, छापामाध्यम, एफएम रेडियो र टेलिभिजन जस्ता सञ्चार माध्यम स्थापनापूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक महसुस भएको खण्डमा मात्र स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायहरुसमक्ष महोत्सवले अपिल गरेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजित तीनदिने फेस्टिवलमा देशभरीका ३ सय बढी पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।